Yacin Brahimi oo helay abaalmarinta BBC ee Cayaarhanka Sanadka - BBC News Somali
Yacin Brahimi oo helay abaalmarinta BBC ee Cayaarhanka Sanadka
Abaalmarinta BBC ee Cayaaryahanka kubadda cagta Africa ayaa lagu dhawaaqay.
Kadib boqolaal kun oo cod oo dadwaynuhu dhiibteen, waxaa loo caleemo saaray Cayaaryahanka Kubadda Cagta sanadka ee Africa oo BBC ay bixiso, Cayaaryahanka Yacine Brahimi oo u cayaaray qaranka Algeria iyo kooxda Porto.
Waligeed horay uma dhicin mudada 23ka sano ee abaalmarintu jirtay, in uu cayaaryahan u dhashay Algeria uu noqdo cayaaryahanka sanadka ee Africa, balse Brahimi wuxuu ku kasbaday kadib markii uu soo bandhigay cayaar wanaag iyo kaalintiisa oo noqotay mid aan la iloowi karin sanadkii 2014.
Wuxuu goolal guulaysi ah ka dhaliyay kooxda Barcelona ee xoogga badan, sadex gool oo cayaar kaliya wuxuu ka dhaliyay tartanka Champions League. ouadpp Algeria ay gaartay is reereebka koobka adduunka markii ugu horaysay ee taariikhda.
Waxay ahaayeen guulahaas uu gaaray kuwo ku filnaaday dhagaystayaasha BBC in u codeeyaan in uu sanadkan ahaa cayaaryahankii ugu wanaagsanaa qaaradda Africa, wuxuu ka guulaystay cayaartoydii kula tartamaysay abaalmarinta oo kala ahaa Pierre-Emerick Aubameyang ee Gabon, Vincent Enyeama ee Nigeria, Ivory Coast’s Gervinho iyo Yaya Toure oo sanadkii hore ku guulaystay.
Wuxuu horay uga mid ahaa xulka qaranka dhalinyarada Faransiiska, Brahimi oo 24 jir ah wuxuu sheegay in abaalmarinta ay u tahay 'sharaf wayn' iyo in ay dhiirigalin doonto siina xoojinayso muddada uga harta cayaaraha.